Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay muqdishoo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay muqdishoo
October 28, 2019 Duceysane399
Ugu yaraan hal qof oo ka mid ah shaqaalaha Waaxda Caafimaadka Gobolka Banaadir ayaa ku geeriyooday, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen, kaddib markii qarax miino uu ka dhacay agagaarka Isgoyska Taleex.
Qaraxan ayaa ahaa mid lagu dhex qariyay jawaan qashin ah oo wadada dhinaceeda la dhigay, waxaana saaka intii ay socotay howlaha nadaafada iyo qaadista qashinka la dhigo hareeraha wadada Maka Al-Mukarama la maqlay mar kaliya qaraxa.
Wararka ayaa sheegaya in sidoo kale uu waxyeelo soo gaaray gaarigii qashin guraha ahaa, waxaana markii qaraxa dhacay goobta gaaray Ciidamada Amniga iyo gawaarida gurmadka degdega, kuwaasoo qaaday dadkii dhaawacmay.
Inta badan shaqaalaha nadaafadda ayaa la kulma qaraxyo xilliyada ay ku guda jiraan ololahooda nadaafadda, waxaana dhowr jeer dhacday goobo ay ka sameynayeen olole nadaafadeed in lagu qarxiyay oo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray.
Waddooyinka Muqdisho ayaa subax walba waxaa laga sameeyaa howlo nadaafadeed oo ay qaabilsan yihiin shaqaale ka tirsan Waaxda Nadaafadda Gobolka Banaadir iyo gaadiid qashin guro ah.
Gudiga doorashada madaxweynaha soomaaliya oo soo saaray jadwalka doorashadsa madaxweynaha
January 25, 2017 Duceysane
Diyaarado dagaal oo xalay duqeeyey Gobolka Gedo